Ngaba Izinto Zadalwa Okanye Zazivelela?—Ndingayicacisa Njani Inkolelo Yam Yokuba Zonke Izinto Zadalwa? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Ukholelwa ekubeni izinto zadalwa, kodwa awukhululeki ukuthetha ngaloo nto esikolweni. Mhlawumbi iincwadi zesikolo zithi izinto zange zadalwa kodwa zazivelela, unalo nexhala lokuba ootitshala nabantwana ofunda nabo baza kuhlekisa ngawe. Ungakhululeka njani ukuze ukwazi ukucacisa inkolelo yakho yokuba zonke izinto zadalwa?
Unako ukuyenza le nto!
Izinto ezinokukunceda ukwazi ukucacisa inkolelo yakho
Unokucinga ngolu hlobo: ‘Hayi mna andikho krelekrele, andinako ukuxoxa nabanye ngale nto.’ Le yindlela uDanielle awayekade ecinga ngayo. Uphinda athi, “Ndandingakuthandi tu ukuphikisana notitshala nabantwana endandifunda nabo.” UDiana yena uthi: “Ndandibhidakala xa besebenzisa amagama anzima esayensi.”
Noko ke, musa ukuzama ukubatsalela ecaleni lakho. Okuvuyisayo kukuba, akuyomfuneko ukuba ube krelekrele kwizifundo zesayensi ukuze ucacise isizathu sokuba ukholelwa ekubeni zonke izinto ezikhoyo zadalwa.
Icebiso: Sebenzisa le ndlela ilula iseBhayibhileni ekumaHebhere 3:4: “Ndlu nganye inomakhi wayo, kodwa lowo wazakhayo zonke izinto nguThixo.”
Xa ithetha ngamaHebhere 3:4, enye intombazana enguCarol ithi: “Khawube nomfanekiso-ngqondweni wakho uhamba kwihlathi elishinyeneyo. Kule ndawo ukuyo akukho kwanto ethi kukho abantu. Ukuba uthe gqi nomcinga upha phantsi, abantu abaninzi bebeya kuthi, ‘Ukhona umntu obelapha.’ Ukuba into encinane nengenamsebenzi njengomcinga ibonisa ukuba yenziwe ngumntu onengqondo, kubeka phi ke ngendalo!”
Ukuba umntu uthi: “Ukuba yinyani le yokuba zonke izinto zadalwa, ngubani ke owadala uMdali?”
Unokuphendula uthi: “Isibakala sokuba singazi yonk’ into ngoMdali asithethi kuthi akakho. Ngokomzekelo, usenokungayazi imvelaphi yomntu owenza iselfowuni yakho, kodwa uqiniseke ngelokuba wayenza, akunjalo? [Mvumele aphendule.] Zininzi izinto esinokuzifunda ngoMdali. Ukuba uyafuna ukuzazi, ndingakufundisa.”
IBhayibhile ithi ‘ufanele ukulungele ukuzithethelela phambi kwakhe wonk’ ubani ofuna kuwe isizathu sethemba elikuwe, kodwa usenjenjalo ngomoya wobulali nentlonelo enzulu.’ (1 Petros 3:15) Kukho izinto ezimbini ekufuneka uziqonde—oko ukuthethayo, nendlela okuthetha ngayo.
Oko ukuthethayo. Kubalulekile ukuthanda uThixo, ibe kunokukukhuthaza ukuba uthethe ngaye. Kodwa ukuxelela abanye ngendlela omthanda ngayo uThixo akwanelanga yaye akunakubenza babone ukuba zonke izinto zidalwe nguye. Kungakuhle ukwenza imizekelo ngendalo ukuze ungqine into yokuba uThixo wadala.
Indlela othetha ngayo. Zithembe kodwa ungabi krwada okanye ubadelele abanye. Abantu banokuyiva into oyithethayo ukuba uyazihlonela iinkolelo zabo uze ubavumele bazenzele ukhetho lwabo.
“Ndicing’ ukuba kubalulekile ukuba ungabi krwada okanye ube ngungqondo-ngqondo othile. Isenokungahambeli ndawo naloo ncoko ukuba uthetha ngendelelo.”—UElaine.
Ukulungiselela ukumela iinkolelo zethu kufana nokuzilungiselela ngaphambi kokuba imozulu itshintshe
Enye intombazana enguAlicia ithi: “Ukuba andikhange ndilungiselele kakuhle, ndiyathula kuba ndingafuni kuhlazeka.” Njengoko uAlicia ebonisa, ukuze siphumelele kufuneka silungiselele kakuhle. UJenna uthi, “kuba ngcono noko xa ndinomzekelo oxhasa inkolelo yam.”
Ungayifumana phi imizekelo? Ulutsha oluninzi luye lwaphumelela kuba lusebenzise ezi zinto zilandelayo:
The Wonders of Creation Reveal God’s Glory (ividiyo)
Amanqaku akuVukani! athi, “Ngaba Yadalwa?” ayafumaneka nakwiWatchtower LAYBRARI EKWI-INTANETHI (Bhala la magama “ngaba yadalwa” [kanye ngale ndlela ibonisiweyo.])
Sebenzisa iWatchtower LAYBRARI EKWI-INTANETHI ukuze uzenzele uphando olungakumbi.
Mhlawumbi kungaluncedo ukufunda amanqaku andulela eli athi, “Ngaba Izinto Zadalwa Okanye Zazivelela?”
Inxalenye 1: Kutheni Ukholelwa KuThixo?
Inxalenye 2: Kutheni Ufanele Ungayikholelwa Into Yokuba Izinto Zazivelela?
Inxalenye 3: Kutheni Umele Ukholelwe Ukuba Izinto Zadalwa?
Icebiso: Khetha imizekelo oyithandayo. Kuza kuba lula ukuyikhumbula yaye uza kukwazi ukuthetha ngokuzithemba. Khawuqhelisele indlela oza kuthetha ngayo.
“Ukuba sisuka kwezinye izilwanyana, kutheni ke sineempawu ezifana nothando nobubele? Ezi mpawu zikwenza ucinge ngabanye kunesiqu sakho. Andiyiva ncam mna into yokuba ezi mpawu sizifumene kwizilwanyana.”—UBrittany.
“Kwibhayoloji ndafunda ngendlela umzimba womntu neeseli ezisebenza ngayo. Nangona sasifundiswa ukuba izinto zazivelela, mna ndabona ukuba senziwe ngumntu okrelekrele gqitha.”—UBreanna.
“Andilithandabuzi Elokuba Ubomi Badalwa NguThixo”
Funda isizathu sokuba esinye isazinzulu sitshintshe imbono esasinayo ngeBhayibhile, indaleko, nendlela obaqala ngayo ubomi.